10 M wee hụ ka mmụọ ozi ọzọ dị ike+ nke yi ígwé ojii+ dị ka uwe si n’eluigwe na-agbadata, eke na egwurugwu dịkwa n’isi ya, ihu ya dịkwa ka anyanwụ,+ ụkwụ ya+ dịkwa ka ogidi ọkụ, 2 o jikwa obere akwụkwọ mpịakọta e meghere emeghe n’aka. O wee zọkwasị ụkwụ aka nri ya n’elu oké osimiri, ma zọkwasị ụkwụ aka ekpe ya n’elu ala,+ 3 o wee were oké olu tie mkpu dị nnọọ ka mgbe ọdụm+ bigbọrọ. Mgbe o tiri mkpu, égbè eluigwe asaa+ ahụ kwuru okwu. 4 Mgbe égbè eluigwe asaa ahụ kwuru okwu, m nọ na-achọ ide ihe; ma anụrụ m ka otu olu si n’eluigwe+ sị: “Kachite ihe+ égbè eluigwe asaa ahụ kwuru akara, edekwala ya ede.” 5 Mmụọ ozi ahụ m hụrụ nke guzo n’elu oké osimiri na n’elu ala wee welie aka nri ya n’eluigwe,+ 6 o jikwa Onye ahụ nke na-adị ndụ+ ruo mgbe niile ebighị ebi,+ bụ́ onye kere eluigwe na ihe ndị dị n’ime ya, na ụwa+ na ihe ndị dị n’ime ya,+ na oké osimiri na ihe ndị dị n’ime ya, ṅụọ iyi, sị: “A gakwaghị egbu oge;+ 7 kama n’ụbọchị mmụọ ozi nke asaa+ ahụ ga-afụ opi, mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ fụọ opi ya,+ a ga-emezu ihe nzuzo ahụ dị nsọ+ nke Chineke, dị ka ozi ọma nke o zisaara ndị ohu ya bụ́ ndị amụma+ si dị.” 8 Olu ahụ+ m nụrụ nke si n’eluigwe wee na-agwa m okwu ọzọ, sị: “Jee nara mmụọ ozi ahụ nke guzo n’elu oké osimiri nakwa n’elu ala+ akwụkwọ mpịakọta ahụ e meghere emeghe nke o ji n’aka.” 9 M wee gakwuru mmụọ ozi ahụ, gwa ya ka o nye m obere akwụkwọ mpịakọta ahụ. O wee sị m: “Were ya taa,+ ọ ga-eme ka afọ luo gị ilu, ma ọ ga-atọ gị ụtọ n’ọnụ dị ka mmanụ aṅụ.” 10 M wee nara mmụọ ozi ahụ obere akwụkwọ mpịakọta ahụ o ji n’aka, taa ya.+ Ọ tọrọ m ụtọ n’ọnụ dị ka mmanụ aṅụ;+ ma mgbe m tachara ya, o mere ka afọ luo m ilu. 11 Ha wee sị m: “Buo amụma ọzọ banyere ndị dị iche iche na mba dị iche iche na asụsụ dị iche iche na ọtụtụ ndị eze.”+